Yimaphi amaqhinga, amaqhinga, neziteshi okufanele ukuthi abathengisi bagxile kuzo ngo-2017 | Martech Zone
Yimaphi amasu, amaqhinga, neziteshi okufanele abathengisi bagxile kuzo ngo-2017
NgoMsombuluko, Januwari 16, 2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ngibheke phambili ekufundeni kumazwana noma emphakathini wethu ukuthi ugxilephi ku-2017. Njenge-ejensi, sidonswa ngezikhombisi eziningi kepha ukugxila kwethu kumakhasimende kuyaqhubeka nokwandisa imali abayisebenzisayo yokukhangisa nokuhlinzeka inani imikhiqizo yethu nezinsizakalo abatshalile kuzo. Inzuzo esinayo njengomshicileli kanye nomenzeli ukuthi singakwazi ukuhlola izinto ezicwebezelayo ukunciphisa noma iyiphi ingozi jikelele. Ukwamukelwa okusheshayo kwe ubuchwepheshe bokumaketha kunenzuzo… kepha kuphela uma kunengqondo.
Ukukusiza unciphise ukugxila kwakho, bheka imininingwane emisha ye-MDG Advertising, Izinqumo Ezifanele Zenziwe Njalo Ngamamaki Ngamunye wezi-7. Iqhakambisa imibono nezindlela ezisemqoka okufanele zikusethele kahle unyaka ozayo.
Sibheke omunye unyaka wamathemba ethu edonsa kanzima impela. Babengenaso isabelomali noma amaqembu okwazi ngokugcwele amandla abo wokumaketha. Ngenxa yalokho, umsebenzi omningi wasetshenziswa kulokho abakwenzayo iphumelele nganoma yini abangayenza ukuthenga ukugcina amakhanda abo ngaphezu kwamanzi. Imethrikhi eyodwa ebalulekile esiyibone ilahlekile kuwo wonke amathemba kwakuwukulindelwa abakutholayo utshalomali lokumaketha kufanele lube njengephesenti lemali engenayo iyonke. Lokho kuyisiyalo esihle sokutshala imali ebhizinisini lakho manje, kunokuba kamuva, ukuze uqhubeke nokusheshisa ukukhula kwakho.
Amasu Wokumaketha, Amacebo, noma Iziteshi Zokugxila Ku-2017
Abantu ngabanye, hhayi iziteshi: Bangu-25% kuphela abasebenzi bezamabhizinisi abanohlelo olunabile lokunqamula iziteshi Ukugxila kumasu akho ohambweni lwabathengi ngabodwana nama-akhawunti kuzokusiza ekwandiseni nasekuhlanganiseni amasu akho wesiteshi se-omni. Ukuthengisa okususelwa ku-akhawunti (ABM) iyaqhubeka nokushayela amaningi ala maqhinga.
Ukuzenzekelayo: Ama-94% wabakhangisi abazenzele ezinye izinhlelo zabo bathi kuthuthukise ukusebenza kwenkampani yabo Ngenkathi iziteshi namasu eba yinkimbinkimbi ngokwengeziwe, izinsiza zokumaketha ezinkampanini zivame ukuba zincane kakhulu. Okuwukuphela kokukhetha kwabakhangisi ukubheka kubuchwepheshe bokumaketha ukuphatha nokwandisa amasu abo wokumaketha.
Okuqukethwe: Ama-58% wabathengisi be- # B2B abaphumelela kakhulu banamasu wokumaketha okuqukethwe abhalwe phansi Amabhizinisi akhiqiza ithani lokuqukethwe okungasetshenziswanga, okungabonwa, nokwenza okuphansi nsuku zonke. Sincoma kakhulu ukuthi kusungulwe ifayela le- umtapo wokuqukethwe indlela yokukhiqiza okuqukethwe.
Inhlanzeko yedatha: Idatha yamakhasimende yabathengisi abathengisayo ayi-24% ayinembile, ngokwesilinganiso Njengoba okwenziwe ngezifiso kanye nokuhlangenwe nakho kwamakhasimende okuxhumeke ku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi kulindelwa ngabathengi namabhizinisi, idatha embi izoba iva ezinkampanini eziningi. Yingakho amapulatifomu wedatha yamakhasimende zikhula ngokwamukelwa.
Ividiyo: Kube nokwanda okungama-20% ebuningini bevidiyo eku-inthanethi ebukwe ngo-2016 Ividiyo isheshe yaba yindawo yokuqukethwe ethandwayo yabathengi abaningi. Ukufunda izintambo zevidiyo - njengokuthi kanjani umsindo oshibhile ubuhlungu ngaphezu kwevidiyo embi - kubalulekile njengokukhanyisa, ukubhala phansi, nobude bevidiyo.
Security: U-29% wabo bonke abathengi ugwema ukwenza oku-inthanethi ngenxa yezokuphepha I-Trust ingesinye sezithiyo ezinkulu kumthengi noma ibhizinisi elikuthola ku-inthanethi futhi eliguqula kusuka kulokho kube iklayenti. Ukuqinisekisa zabo idatha iphephile futhi ukuxhumana nezinyathelo ozithathayo ukuvikela okuqukethwe kwazo kubalulekile.
I-Emerging Technologies: I-Artificial Intelligence ibikezelwe ukuthi izophinda kabili izinga lokukhula komnotho ngonyaka ka-2035 kanti i-Virtual reality Internet traffic kulindeleke ukuthi inyuse amahlandla angama-61 ngonyaka ka-2020. Lobu buchwepheshe bunamandla amangalisayo ekwandiseni uhambo lwamakhasimende nasekuthuthukiseni isipiliyoni samakhasimende.
Tags: abmukumaketha okusekelwe ku-akhawuntiezishintshayoukumaketha kwesiteshiumtapo wokuqukethweUkukhangisa Okuqukethweidatha yekhasimendeinhlanzeko yedathaubuchwepheshe obuvelayoukuzenzekelayo kokuzenzekelayonokuvikelekaokuqukethwe kwevidiyoukukhangisa kwevidiyo
Liyini ipulatifomu yeDemand-Side (DSP)?
Izeluleko eziyi-10 ezibalulekile zabathengisi be-Novice